IMelomania Touch, amahedfoni amahle avela eCambridge Audio | Izindaba zamagajethi
IMelomania Touch, amahedfoni amahle avela eCambridge Audio
UMiguel Hernandez | 01/01/2021 18:00 | Kubuyekezwe ku- 23/12/2020 00:28 | General, Izibuyekezo
Kwezinye izikhathi besivele sihlaziye umkhiqizo ovela eCambridge Audio, inkampani yomsindo eyaziwayo esezingeni elise-United Kingdom futhi eyaziwa kakhulu ngekhwalithi yemikhiqizo yayo. Lesi sikhathi sihamba nomkhiqizo osanda kwethulwa esingafuni ukuwuphuthelwa, i- IMelomania Touch.
Amahedfoni akamuva e-True Wireless (TWS) avela eCambridge Audio afikile emakethe futhi siwahlolile. Sikutshela ukuhlaziywa kwethu okujulile kweCambridge Audio Melomania Touch entsha nazo zonke izici zayo ezinemininingwane. Ngaphandle kokungabaza, inkampani yaseBrithani iphinde yenza umsebenzi osezingeni eliphakeme.
1 Idizayini: Okugqamile nekhwalithi
2 Izici zobuchwepheshe: I-Hi-Fi centric
3 Ikhwalithi yomsindo: Ukuhlaziywa kwethu
4 Uhlelo lokusebenza lweMelomania, inani elengeziwe
5 Ukuzimela kanye nesipiliyoni somsebenzisi
Idizayini: Okugqamile nekhwalithi
Ungabathanda kakhulu noma ubathande kancane, kepha usuyazi vele ukuthi ekuhlaziyweni kwami ​​ngithanda ukushaya ihlombe imikhiqizo eziziqhelanisa nesidina noma esezingeni futhi ikhethe ukwakheka okunesibindi noma okwehlukile. Lokhu kunjalo ngale Melomania Touch, ama-headphone amasha eCambridge alalelwayo.
Ubathandile? Ungazithenga ngentengo enhle ngo- Lesi sixhumanisi.
Well inkampani yaseBrithani uthi uhlaziye izindlebe ezahlukahlukene ezingama-3000 futhi okuvelele kube yilomklamo oyingqayizivele futhi ongajwayelekile. Ngaphandle sithola ipulasitiki epholishiwe ebukeka iyinhle impela, izembozo zenjoloba kanye namaphedi ayo.
Ngokwami ​​soy walabo abanezinkinga ngama-headphone asezindlebeni ngoba ngilahla zonke izinhlobo. Lokhu akwenzeki kimi ngeMelomania Touch, bane- silicone "fin" eyenza ukuthi amahedfoni anganyakazi futhi ilungele zonke izinhlobo zemisebenzi. Inani elikhulu lamapayipi afakiwe nomkhiqizo likwenza kube nzima ukungazivumelanisi nokuthanda kwakho.
Ubukhulu Icala lokushaja: 30 x 72 x 44mm
Ubukhulu Amahedfoni: Ukujula okungama-23 x Ukuphakama (okokufaka endlebeni ngaphandle kwehhuku) 24 mm
Isisindo Icala: 55,6 amagremu
Isisindo Isifakwakhanda: 5,9 amagremu lilinye
Ngokusobala kuyadingeka ukukhuluma ngekhava. Sithola ikesi lokushaja elikhokhelwa kahle, elenziwe ngesikhumba sokulingisa ngaphandle, linezinkomba zebhethri ezinhlanu kanye nembobo ye-USB-C ngemuva. Ibhokisi linokuma okusaqanda nosayizi ohlangene futhi likhululekile ukuthuthwa, libonakale liyimpumelelo futhi iqiniso ukuthi likhipha izinga.
Ekugcineni, yazi ukuthi singathenga ama-headphone kumhlophe nokumnyama, kuya ngokuncamelayo nalokho esikuthandayo.
Izici zobuchwepheshe: I-Hi-Fi centric
Masikhulume ngezinombolo bese siqala nge-processor yayo engama-32-bit dual-core processor kanye nesistimu eyodwa yomsindo owodwa. I-Qualcomm QCC3020 Kalimba 120MHz DSP, ngale ndlela nangaphakathi I-Bluetooth 5.0 Class 2 sithola amakhono okudlulisa umsindo asezingeni eliphakeme, noma ngabe okuningi kuhlobene nakho konke lokhu ama-codec: i-aptX ™, i-AAC kanye ne-SBC enamaphrofayli A2DP, AVRCP, HSP, HFP.
Manje siya ngqo kubashayeli, lezozipikha ezincane ngaphakathi kwamahedfoni aguqula ukucubungula okungaka kube umsindo wekhwalithi. Sinohlelo olushukumisayo olune-diaphragm ene-graphene reinforcing ye-7 mm, umphumela kuba idatha elandelayo:
Imvamisa: 20 Hz - 20 kHz
Ukuhlanekezelwa kweHarmonic: <0,04% ku-1 kHz 1 mW
Ezingeni lobuchwepheshe, futhi kufanele sisho imakrofoni, futhi sinamadivayisi amabili we-MEMS anokukhanselwa komsindo we-cVc (futhi avela kuQualcomm) nokuzwela kwe-100 db SPL ku-1 kHz.
Sine ngaphakathi kwesimo ngebhethri le-500 mAh kuphela nokuthi izokhokhisa ku-5V ngekhebuli yokushaja efakiwe ye-USB-C, hhayi i-adaptha yamandla. Lokhu kuzodinga cishe imizuzu eyi-120 yokukhokhiswa okugcwele kusuka ku-0% kuya ku-100%.
Ikhwalithi yomsindo: Ukuhlaziywa kwethu
Usuvele ubone izinombolo eziningi ezikutshela ngokungenalutho ngaphandle kokuthi unolwazi oluthile, ngakho-ke ake siye ekuhlaziyweni kwethu okuvamile, bekuyini okuhlangenwe nakho kwethu ukuzisebenzisa, ikakhulukazi uma sibheka ukuthi lapha sizame cishe konke ukuphela okuphezulu kwama-headphone we-TWS ezitholakala emakethe.
Phansi: Ngokwethembeka, lapho ama-headphone enama-protagonists aphansi, imvamisa sibhekene nomkhiqizo wentengiso ofuna ukumboza okunye ukushiyeka. Lokhu akunjalo ngeMelomania Touch, bekuyinto ongayilindela kubhekwa ukuthi bangumkhiqizo weCambridge Audio. Kodwa-ke, iqiniso lokuthi abafiki ukusethwa kabusha ngama-bass avelele akusho ukuthi abakwazi ukubukeka kanjalo, sizokhuluma ngalokhu ngokuhamba kwesikhathi. Ama-bass kulapho kudingeka abe khona futhi asivumela ukuthi silalele konke okuqukethwe. Ngokusobala, uma ucabanga ukulalela i-reggaeton yokuhweba kuphela, kungahle kungabi ngumkhiqizo wakho.
Abezindaba: Njengenjwayelo, ukuvivinywa kukotini kwenziwa ngeNdlovukazi encane, Ingubo ne-Artic Monkeys. Ambalwa ama-headphone angawukhohlisa lo mculo futhi sithola umehluko olungile wezinsimbi.
Ngokuvamile, asinakho ukulahleka kwekhwalithi, asinakho ukuphazamiseka namazwi azwakala kahle. Ukuhlolwa kwethu kwenziwe ngeHuawei P40 Pro ene-aptX ne-iPhone nge-AAC.
Uhlelo lokusebenza lweMelomania, inani elengeziwe
Kade sihlola isicelo IMelomania esigabeni se-beta. Umphumela ube owehlukile, uhlelo lokusebenza luzosivumela konke lokhu. Ungathola uhlelo lokusebenza lwe-iOS ne-Android (ngalesi sikhathi sokubhala akukakhululwa ngokusemthethweni).
Dala amaphrofayli wangokwezifiso
Yenza kusebenze / ungasebenzi imisebenzi yokuthinta
Nika amandla / khubaza imodi yokubonisa ngale
Ngaphandle kokungabaza, kubaluleke kakhulu ukukwazi ukuthola izibuyekezo (ezimbili ngenkathi sizihlola) futhi ngaphezu kwakho konke ukwenza ikhwalithi yomsindo ngokwezifiso kumahedfoni aleli zinga, bravo to Cambridge Audio.
Siqala ngokuzimela, Amahora angama-50 esewonke uma sibheka amahora awo afinyelela kwayi-9 aqhubekayo (kuphela ngephrofayili ye-A2DP) kanye nama-41 asele anikezwa yibhokisi. Iqiniso ukuthi sithola cishe amahora ayisikhombisa omsindo oqhubekayo ngekhwalithi ephezulu futhi nemodi yokubonisa okucacile ingasebenzi, cishe amahora angama-7/35 esewonke ngamanani aphezulu.
Ngokusebenzisa isikhathi eside banethezekile, iNoma sisebenzisa i-Transparency Mode, ezokwamukela imisindo efana nama-alamu noma amaphimbo ngemakrofoni ukuyikhiqiza kabusha ngokucacile, futhi ukuthi ukuba ngama-headphone asezindlebeni ngokubamba okuhlukile, sinokukhanselwa komsindo okwenziwe ngokwanele ukujabulela umculo nokuthi i-Transparency Mode ingadingeka.
Okuhlangenwe nakho kwami ​​ngeMelomania Touch kube kuhle impela, siphinde sabhekana nomkhiqizo we-premium omuhle ovela eCambridge Audio, lokhu kubonakala nentengo yayo, kusuka ku-139 euros Ungabathenga bobabili kuwebhusayithi yayo esemthethweni futhi ngokusebenzisa Lesi sixhumanisi.
Kuthunyelwe ku: UJanuwari 1 we-2021
Ukulungiswa kokugcina: December 23 we-2020
Izinto zekhwalithi nokuklama, zizwa njenge-premium
Ikhwalithi ephezulu yomsindo
Ukwenza ngezifiso ngohlelo lwakho lokusebenza
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba zamagajethi » General » Izibuyekezo » IMelomania Touch, amahedfoni amahle avela eCambridge Audio
IHuawei yethula i-beta esemthethweni yeHarmonyOS 2.0 yeselula